Isoftware kunye neenkqubo -Ikkaro
yokuqalisa >> software
Makhe sithethe ngeSoftware. Ukwenza izinto kunye nokusombulula iingxaki. Ingxaki kwiWindows, kwiLinux. Izifundo zeGimp kunye nezinye izixhobo ezinje ngoomatshini ababonakalayo, njl njl.
Sisebenzisa iinkqubo zokusebenza neenkqubo yonke imihla. Amaxesha amaninzi kuvela iingxaki esingazi ukuba sizisombulule njani kwaye ngamanye amaxesha sizivelise ngokwethu ngokungazenzi izinto ngokuchanekileyo.
Ngokuqinisekileyo usebenzisa ikhompyuter emsebenzini wakho, ngaba ufumana ukusebenza ngokukuko? Ngaba unenkqubo ezilungiselelwe okanye ungazenzekelayo ngakumbi? Ngokuqinisekileyo kukho izixhobo ezikuvumela ukuba wandise imveliso, okanye utshintsho oluthile kuzo okanye indlela oyilawula ngayo.
Ewe, siza kubona amaqhinga kunye nezifundo zazo zonke iintlobo zezinto.
I-AntennaPod sisidlali sePodcast Vula Umnikezi. Sisimahla, singumthombo ovulekileyo kunye nesicelo sasimahla esinoyilo olucocekileyo noluntle kunye nazo zonke izinto endizidingayo kumdlali wePodcast / umphathi wokubhalisela.
Kwaye ngumdlali ebendimvavanya okwethutyana kwaye undisebenzela ngokumangalisayo. Ndiyisebenzisa kunye F-Droid kwi-Android, nangona unokuyifumana kwi-Play Store.
Ukuza kuthi ga ngoku bendisebenzisa iVoox kwaye ndiyitshintshe ngaphezulu kwe-100Mb ye-AntennaPod engaphezulu nje kwe-10MB. I-iVoox, ngaphezu kweentengiso, yayihlala ibetha kum, nto leyo eyenza ukuba inganyamezeleki. Yeyona ndlela ilungileyo kubadlali abaninzi bezorhwebo.
Ngale ndlela, isebenza kakuhle kum, andinazo iintengiso kwaye ndisebenzisa inketho yoMthombo oVulekileyo nakwi-F-Droid. Okwangoku yonke into iluncedo.
Sele sibonile yintoni iF droid, iingenelo zayo nesizathu sokuba sifanele siyisebenzise. Kweli nqaku ndifuna ikwazise ezinye zezicelo zayo ezilungileyo. Kuyacaca ukuba oku kuxhomekeke kakhulu kuba esona sicelo singcono siya kuba seso sihlangabezana neemfuno zethu. Kodwa nazi ezimbalwa endicinga ukuba zingakunceda.
Ngoko ke ndiza kuyishiya izicelo endizithatha zinomdla kakhulu kule ndawo yokugcina usetyenziso lwasimahla lweSoftware. Awuzukufumana ezinye iindlela zokunye, kwaye kwabanye uya kuba sele unezicelo ezifakiweyo ezenza okufanayo. Lixesha elifanelekileyo lokuvavanya ukuba unomdla wokudlulisela eso sicelo osisebenzisayo kwesinye isicelo sasimahla seSoftware.
Yi le iqhinga elilula, ukuseta okuhle ngokwenene, kwi-app yethu yeWallapop ukusazisa xa kuvela imveliso entsha esiyikhangelayo. Ngale ndlela akusayi kufuneka sisoloko singena kwaye sikhangela into entsha.
Nje Senza izilumkiso esizidingayo kwaye iya kusithumela izaziso.xa bethumela imveliso entsha edibana neempawu esizikhethileyo kwizihluzi.
Umzekelo ocacileyo ukhangela iNintendo Switch. Sinokwenza iWallapop isazise ngesaziso xa umntu ethengisa iNintendo Shintsha, ukuya kuthi ga kwixabiso elithile, ngesihluzo somgama, njl.
I-F-Droid yindawo yokugcina isoftware, ivenkile yeapp, enye indawo kwiVenkile yoDlalo. YiPlay Store yesoftware yasimahla. I-F-Droid yisoftware yasimahla kwaye izicelo esinokuzifumana ngaphakathi ziiSoftware eziMahala okanye uMthombo oVulekileyo (FOSS). Singayifumana ikhowudi yakho kwiGitHub ukuyiphonononga kwaye siyiguqule ngendlela esiyithandayo ukuba siyafuna.
Kwaye nje ukuba uyazi ukuba yintoni na, into elandelayo uya kuzibuza ukuba kutheni kufuneka uyifake ukuba unayo iVenkile yePlay.
AKUKHO usetyenziso lweepirate. Ngenxa yoko, unezinye iindlela. I-F-Droid kukuzibophelela kwisoftware yasimahla kwaye yiloo nto.
Ndiyaqala ukudlala Khangela kwaye ndibona ngokuzonda ukuba zikhona izicelo zedesktop zeWindows, MacOS, ChromeOS kunye ne-Android app kodwa akukho sicelo sisemthethweni seLinux.
Bekukho isicelo seLinux kwaye baye basiyeka. Umyalezo wakho ngoku
Okwangoku, iScratch App ayihambelani neLinux. Sisebenza nabanegalelo kunye noluntu oluvulelekileyo lokufumana indlela yeScratch ukuze isebenze kwiLinux kwixesha elizayo. Hlala unolwazi!
Kuyinyani ukuba inguqulelo ye-intanethi ingasetyenziswa kwisikhangeli. Kodwa ndiyazithanda izicelo zedesktop kuba zinenzuzo yokuba singaqhubeka sizisebenzisa nangaphandle koqhagamshelo lwe-Intanethi kwaye ukuba sifuna ukugxila kulo msebenzi sinokuvala isikhangeli kunye namanye amawaka eethebhu, ezihlala zingumthombo wokuphazamiseka. .
I-Scratch lulwimi lweprogram olwenziwe yi-MIT kwaye lusekelwe kwi-block-based visual interface, ukwenzela ukuba iququzelele kakhulu inkqubo yabantwana kunye nabantu abangenalwazi. Kucetyiswa kwi-8 ukuya kwi-16 iminyaka.
Konke oku kuxhaswa yi Isiseko seScratch, umbutho ongenzi ngeniso onjongo yawo iku:
Injongo yethu kukubonelela bonke abantwana, abasuka kuzo zonke imvelaphi, amathuba okucinga, ukuyila kunye nokusebenzisana, ukuze bakwazi ukubumba ihlabathi langomso.
Kodwa kwababalulekileyo, yintoni enokwenziwa ngeScratch.
Los iifayile ezinolwandiso lwe-.py ziqulathe ikhowudi yolwimi lwenkqubo yePython. Ngale ndlela xa uphumeza ifayile ulandelelwano lwekhowudi luyenziwa.
Ngokungafaniyo ne- .sh ifayile eyenza imiyalelo enokuthi nayiphi na inkqubo yeLinux iphumeze, ukwenzela ukuba ifayile ye.py isebenze kuya kufuneka uyihlohle iPython.
Le yinto yokuqala ekufuneka uyenzile ukuba ufuna ukuqala ukufunda ukwenza inkqubo ngePython.
Le yindlela endiyisebenzisayo ngoku yongeza ii-watermark okanye ii-watermark kwimifanekiso yeblogi. Ndidla ngokuba neefoto ezaneleyo zamanqaku kwaye ngesi sikripthi se-bash ndongeza i-watermark kwimizuzwana emi-2 okanye emi-3.
Ngexesha elidlulileyo ndasebenzisa I-GIMP yokuhlela uninzi. Olu khetho, apho sabona kwiblogi isasebenza, kodwa oku kubonakala kukhawuleza kakhulu kum kwaye njengoko ndisitsho yile nto ndiyisebenzisayo ngoku.
Le ndlela ikwafanelekile kubafoti ekufuneka bagqithise imifanekiso ephawulweyo kubathengi, kuba kwimizuzwana embalwa uye wayenza.
Ewe kunjalo, sisisombululo kubasebenzisi beLinux, ndisebenzisa Ubuntu. Ngoku ndikushiya iskripthi kunye nenkcazo yesinyathelo-nge-nyathelo ukwenzela ukuba ungayisebenzisi kuphela kodwa uqonde into eyenzayo kwaye uqale ukufunda i-BASH. Kukho imigca esi-8 kuphela.
Kudala ndikhangela isixhobo esifana nesi I-Zotero, endivumela ukuba ndiququzelele kwaye ndilawule ngendlela elula nesebenzayo lonke ulwazi endilugcinayo kwizihloko endinomdla kuzo, iiprojekthi endifuna ukusebenza kuzo kunye / okanye kumanqaku endiza kuwabhala.
Kwaye nangona i-Zotero yaziwa ngabantu njengomphathi wencwadi kwaye ibingumsebenzi wayo ophambili ixesha elide, namhlanje bona ngokwabo bayichaza iprojekthi njenge Umncedisi wophando lomntu. Kwaye yeyona nto inomdla endakha ndayibona.
Jonga ngoba ukuba unguMenzi okanye uthanda ukusebenza kwiiprojekthi, uphando kwaye uqokelele ulwazi ngezihloko ezahlukeneyo, uya kuthandana.